Kartida biyaha, ka-hortagga fatahaadaha, ilaalinta deegaanka biyaha waa dhammaan maadooyinka ay wax ka qabtaan mas'uuliyiinta dowladda. Laakiin waa maxay dhabta ah siyaasadda biyaha ee Faransiiska? Yaa daryeela maamulka iyo daaweynta biyaha? Sidee loo hirgeliyaa siyaasaddan iyo maalgelintee? Su'aalo aad u badan oo MOOC ka jawaabto.
Wuxuu kuu keenayaa aqoonta ugu weyn si ay u fahmaan maamulka, hawlgalka iyo caqabadaha siyaasadda biyaha dadweynaha ee France5-ta su'aalood oo kala ah:
Qeexitaanka iyo baaxadda siyaasadda guud
Taariikhda siyaasadda guud
Jilayaasha iyo maamulka
Qiimaha iyo qiimaha isticmaalaha
Arrimaha hadda iyo mustaqbalka
Mooc-kani wuxuu kuu ogolaanayaa inaad fahanto siyaasadda biyaha dadweynaha ee Faransiiska.
Siyaasadda biyaha dadweynaha 5 su'aalood Janaayo 17th, 2022Tranquillus
horeAasaaska xiriirka guud ee dhuleed